Soo dejisan Castle TD 1.6.3 – Vessoft
Castle TD – a kulan istiraatiiji weyn si ay u difaacaan qalcaddii ka wuxuush kala duwan. Ciyaaryahanka ayaa waxaa la siiyaa doorasho ee geesiyaal leh sifooyin kala duwan iyo xirfadaha, kuwaas oo soo hagaagay ee koorsada ku dhaco ciyaarta. Castle TD ka mid ah heerarka badan ee dhibka kala duwan la maris ah oo ciyaaryahanka uu kiristaalo ama guulihii iyo wixii ay kordhiso awoodda u gaar ah. In Castle TD waxaa jira dhawr nooc oo xoogeeyey munaarado ilaaliya hawlo kala duwan oo fog ee weerarka iyo sidoo kale awood u leh si kor loogu qaado xirfadahooda. Kulankaan ayaa kuu ogolaanaya in aad u aragto sharaxaad iyo sifooyinka cadaawayaashooda, oo xoogeeyey munaarado daafaca iyo dagaalyahan oo ciyaaryahanka uu doortay in bilowgii ciyaarta. Sidoo kale in TD Castle ka Sixir la isticmaalo in ka badan dagaalka wax ku ool ah la diriraan cadaawayaashooda oo ay ku taal jidka loo maro qalcaddii ciyaaryahan.
Tiro badan oo heerar iyadoo ay sii kordhaysa
Noocyada gaarka ah ee dagaalyahan
Noocyada kala duwan ee munaaradaha difaaca oo cadaawayaashiinna weerarka
Tartamada ee garoonka ayaa waxaa la ciyaaryahano kale
Soo dejisan Castle TD
Faallo ku saabsan Castle TD
Castle TD Xirfadaha la xiriira